Daawo: Wakiilka Q’M ee Somalia oo la Yaaban Qaranimada ay Somaliland sheegato” Cid aqoonsan ma leh”-Video. | | Horufadhi Online
Wakiilka Q,M ee dalka Soomaaliya u qaabilsan ayaa ka hadlay arimaha dalka Soomaaliya guud ahaan, wuxuuna shir jaraa’id kaga jawaabay su aalo badan ay weydiiyeen wariyayaashu.
Wakiilka ayaa sidoo kale ka hadlay sida maamulka Somaliland naftiisa ugu sheegay beenta ah ”Qaran”’!!. Wuxuuna sheegay inuusan jarin qaran mar wax laga weydiiyey Hawada, ayagaa keliyaa naftooda u yaqaan naftooda qaran, balse Soomaalidu waxay u ogyihiin inay yihiin qayb uun ka mid ah dalka Somalia.
Short URL: http://horufadhimedia.com/?p=24878
16 Comments for “Daawo: Wakiilka Q’M ee Somalia oo la Yaaban Qaranimada ay Somaliland sheegato” Cid aqoonsan ma leh”-Video.”
Qofka qoraalka iyo clipka meesha soo dhigay tolow ma dhegaystay su, aalaha iyo jawaabaha mr Keating, mise af ingiriisiga ayaa ku yar. Waraysigu 7;12 second buu socdaa.
Waxaana laga hadlay lacagta EU oo Amison ka jartaytay ku siin jirtay Somalia, waxa kaloo laga hadlay, Eritrea Sanctions, Ban’s Son in Law, Somalia, Kenya & Khat.
40 daqiiqo buu Somaliland ka hadlay waxaanuu yidhi;
Somaliland go, aan cad bay ku sheegtay inay Somaaliya ka go, een, AU iyo UN-ka ma aqoonsan. Soomaaliya waxay leedahay Somaliland waa naga mid Somaliland-na ma ogola. Hargaysaan tegay dhawaan si diirana waa laygu soo dhaweeyay.
Intaa mid-na been kama sheegin mr Keating.
Bal maad soo gudbisaan marka la weydiiyay; Dawlada Soomaaliya ee wakhtigu ka dhamaaday sharci maku joogtaa?
Mise arinkiinu waa nin ay meeli u cadahay meel ka madow!kkkk
September 30, 2016 - 7:45 am
40 daqiiqo= 40 second
September 29, 2016 - 10:20 pm
OO MA SHAKI BAAD QABTAA BURCO IYO HATGAYSA INAY YIHIIN LABA MAGAALO OO AAN LA AQOONSAN CIDINA WAX KU FALAYN MA RIYAAD WELIGIIN KUJIRI YAA IDINKA QORAYA INTAAN ADUUNYADABA LAGA HADLIN ANIGOO WAQOOYI DHUL BALAADHAN KU LEH AYAANBA OGOLAAN KARIN WAXAA AAD KU RIYOOTAAN XAGEE BUU JOOGAA NINKANI KHIYAALI LAGU DARAY BEEN LAGU DARAY RIYO NATIIJADEEDU WAA ZERO ZERO WAR WELIGIIN QAYLIYA AMA WAX HA LAIDIIN OGOLAADA IS DHAHA KABO IDIN LE,EG AYAAD QAADANAYSAAN LABA MAGAALO WAXAY IDIIN GOYSO AYAAD LEEDIHIIN VIVA DAAROOD VIVA HARTI
Zuuuuuuuuuuuuuz, Burco iyo Hargaysa waa lagaa xukumaa dhidhiibso!
Wakiilku Wuxuu dhahay Waxaa laga hadlay Ka qaybqaadashada doorashooyinka Somaliya in ay Ka dhacaan burco Iyo hargiesa balse wax siyaasad ah Ma jirto . Taas macnaheedu tahay Wiilka jooga burco , oodweyne, salaxlay, Dhoqoshay Iyo ceelafweyn waa in codkooda dhiibtaan si hor Iyo xalaal ah .
Caruurtii Iyo dumarkii snm 26 Sano beenta u shegaysay waa in loo sameeyo wacyigalin Si beentii looga maydho .
September 30, 2016 - 2:12 am
Webkii jidbaale goormuu dhabayaco noqday
September 30, 2016 - 2:18 am
Bbc oo sheegray weerarki maraykanka ee galmudug inay dad shiciba dileen beena loo sheegay hard time na ay siin doomaan butiland
Waa loo yaabaa garoowe
September 30, 2016 - 4:53 am
Horufadhi markay waayaan wax ay sheegaan way sameeyaan
Thanks indr you save us a time …..well done
September 30, 2016 - 6:48 am
puntland maaha meel lagu degdego mooryaantu wax dumin mooyee wax madhisaan viva daarood and harti
September 30, 2016 - 11:15 am
Hargeysa Iyo burco Waa xarunta boqortooyadii waqooyi.
Anaa kuu taliya Oo masiirkaagu gacanta iigu jira saas Ma ogtahay.
Hada maxa Cali khaliif keenay Inuu wadahadal inoogu yimaado. Lol
Xamar albaabada ayay idin kasoo xidhatay,
Puntland inay lacag idinku qaadato mooyee wax ay idin la qabanaysaa Ma leh. Xitaa qorshaha uguma jirto inay idin xorayso ee lacag uun ba u daran inay ku qaadato dhulbahante Iyo warsengeli Waa buuq land lol
Hadaba Cali wuxuu idiin gartay inaad jilbaha dhulka dhigtaan ood Somaliland baridaan. Lol kkkkkkkkkkkkk
Sxb xarunta darawiishta Waqooyiga Somaliya waa Taleex historical city ? Taleex Soool, Somalia.
Markaad leedayahay puntland baa idinku lacag qaatada Adiga miyeysan Horgale lacagtii Ka dhameyn kkkkkkkkkkkkkkkk iyadoon xataa dhulkooda imankarin.
Xoreyn Ma jirto Sxb waa in Kaliya afarta Horgale leyska qabto kooxda la socota iyagaaba Iska yaacaya hadiiba fakadaan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mida kale Dee Waqooyiga Somaliya waa la yaqaan in qabiilo badan degaan Adiga Kaliya baa somaliyadiid ah .
September 30, 2016 - 1:18 pm
Qofka halqabsi u noqdo waxaan ahaan jiray, xolaan lahaan jiray waa qof Losser ah oo aan hada aan wuxuu yahay jirin!
Daraawiish boqol sano ka hor baa cagta la mariyay. Taleex-na Ciidanka Somaliland baa ku dhex mushaaxa hada.kkk
Wax baan beri ahaan jiray maanta wax ay kuu qabanaysaa ma jirto ee keen fekir kale oo aad maanta wax ku noqoto.
September 30, 2016 - 3:38 pm
Mujaahid laalays baaba ku siiyay jawaabtaan soo watay ingiriisku Waxay u yaqaanaan dadka ku halqabsada beri baan sida ahaan jiray
You live in the past lol kkkkkkk
You don’t live in the present lol
Beri baan sida ahaan jiray miyaad xornimo ku gaadhaysaa lol kkkkkkkk
Maanta maxaad tahay lol kkkkkkkkkkk
Nothing a punch of looser begin me to recognise him as a semi autonomous lol kkkkkkkkkk
September 30, 2016 - 3:42 pm
Puntland uma jeedo inay ku xoraysee inay lacag uun UN ta kaga qaadato in ssc puntland tahay uunba u daran lol kkkkkk
Kaaga daran DDSI lol madaxweynihii cagdheer illey Oo Ka calaacalaya kacdoon Ka amxaarada lol kkkkk
Cabdi illey Oo banaanbax yo ku taageeray sidoo kale xisbiga tigress lol kkkkkk
Chill out iidoor baad cagtiisa hoos daaqaysaa lol kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mid baan Ka ilaaway majeerteen Waxaan gebigoodaba ku noqonay maraykan Oo kale. Lol kkkkk
Kolkay na arkaan cagaha ayay wax Ka dayaan lol kkkkkk
October 1, 2016 - 1:09 am
Mujaahid laalays baaba ku siiyay jawaabtaan soo watay ingiriisku Waxay u
yaqaanaan dadka ku halqabsada beri baan sida ahaan jiray
Nothing but a punch of looser who beging from me to recognise him as a semi autonomous lol kkkkkkkkkk